Qiso cajiib ah: Caruur kala badalantay markii ay dhasheen oo hada waalidkoodii helay | Somaliska
Qiso cajiib ah: Caruur kala badalantay markii ay dhasheen oo hada waalidkoodii helay
Qisadaan waa mid cajiib ah oo ku dhacday labo waalid oo ku nool dalkaasi Ruushka kuwaasoo 12
Irina iyo Anya waa 12 sano jir.
sano ka hor si qaldan u kala badashay caruurta ay dhaleen. Haweeneyda lagu magacaabo Yulia Belyaeva ayaa mudo 12 sano ka hor ah waxay gabadh ku dhashay hospitaal. Gabadheeda waxaa lagu magacaabaa Irina balse xaqiiqadu waxay tahay in aysan Yulia korsan gabadheeda saxda ah.
Yulia ayaa hada ogaatay 12 sano ka dib in ilmaha ay gurigeeda u qaadatay uusan ahayn midkii ay dhashay.
“Waxaan ogaatay markii aniga iyo ninkaygii hore aan isku qabsanay qarashka ilmaha. Waxaan wadatagnay maxkamad taasoo dhalisay in aan qaadno dheecaanka DNA. Jawaabta ayaa noqotay mid layaab weyn nagu noqotay, ma noqon gabadhiisa iyo gabadhayda midna” ayay tiri Yulia.
Booliska ayaa sheegay in taariikhdu markay ahayd 17 December 1998 uu qalad weyn ka dhacay custbitaalka degmada. Labo ka mid ah caruurtii ku dhashay goobtaas ayaa waxaa lagu xiray calaamada magaca oo qaldan taasoo dhalisay in waalidiin qaldan ay qaataan caruurta.
“Markii hore waxaan u mooday kaftan balse markii aan xaqiiqada ogaaday oohin ayaan ka bixi waayay, waxaan ka walwalay waxa ay dhihi doonto gabadhayda iyo xaalada ay ku sugantahay gabadhayda dhabta ah ee aan dhalay, waxaan isdhahay markaan tuugsi ayay ku jirtaa” ayay tiri Yulia.
Waxay go’aansatay in ay raadiso gabadheeda saxda ah iyadoo booliska kaashanaysa. Raadintii
Yulia iyo Naimat
waqti badan ma qaadan oo tuulo 30 daqiiqo u jirta halka ay ku nooshahay Yulia ayaa laga helay gabadheedii saxda ah oo uu korsaday nin Muslim ah oo lagu magacaabo Naimat. Gabadha yar ayaa lagu magacaabaa Anya Iskanderova oo waa 12 sano jir oo waxay u egtahay hooyadeed Yulia oo aysan waligeed arag.
Naimat waxa uu ka soo jeedaa Tajikistan oo waa nin Muslim ah, waxa uu guursaday haweeney ruush ah taasoo ay kala tageen ka dibna waxa uu soo korsaday Anya oo uu u haystay in ay tahay gabadhiisa. Markii Boolisku u sheegeen qaladka dhacay ayuu aamini waayay Naimat oo waa laga dhaadhicin waayay.
“Ka dib booliska ayaa i tusay sawirka gabadha kale ee ay leeyihiin aniga ayaa dhalay. Markii aan arkay wajigeeda waxay noqotay sidii aniga oo isfiirinaya. Waxaan bilaabay in aan ruxdo. Waa mid adag in aan dareemo in gabadhayda ay la kortay reer kale aniguna aan koriyay gabadh kale” ayuu yiri Naimat.
Waqtigaas ka dib ayaa labada reer waxay go’aansadeen in ay si joogto ah u kulmaan. Balse xaaladu ma ahan mid fudud.
“Waa adagtahay. Waayo hal reer waa Muslim reerka kalena waa Kiristaan. Waxaan leenahay dhaqamo kala duwan. Waxaan ka cabsanayaa gabadhii aan soo koriyay ee aan Muslimnimada ku soo koriyay in ay qamriga bilowdo oo aay kalaabyada aado. oo ay iska dhaafto salaada. Waxaan ka cabsanayaa in ay diinta ka baxdo” ayuu yiri Naimat.
Yulia ayaa sidoo kale qirsan in farqi weyn u dhexeeyo nolosheeda iyo mida ay ku soo kortay gabadheeda. Waxay ka cabsaneysaa in ay weydo labada gabdhood. Gabadhii ay soo korisay waxay hada jeceshahay in ay aabaheed waqti badan la joogto halka midii ay dhashay aysan la dhacsaneyn hooyadeeda dhabta ah.
“Waxaan isku dayaa in aan Anya u muujiyo jaceyl balse ma dooneyso. Waxay ku soo kortay dhaqan iyo nolol kale. Runtii isma fahano labadeena” ayay tiri Yulia.
Labada qoys ayaa go’aansaday in ay maxkamad la fuulaan hospitaalkii geystay dhibaatadaan oo waxay ka dalbadeen lacag ka badan $300,000. Dhaqtarka ugu sareeya hospitaalka ayaa telefishinka raaligalin ka bixiyay balse sheegay in uusan awoodin hospitaalku in uu dhiibo lacagtaas
Labada gabdhood ayaa hada doonaya in aysan kala badalan waalidiinta. Waxay ku faraxsanyihiin in ay isbarteen oo waxay noqdeen asxaab isku fiican. Anya gabadha Muslimka ah ayaa sheegtay in ay dooneyso in dhamaantood ay ku noolaadaan hal guri. Dhalashada gabdhahaan ayaa waxaa u dhaxaysay 15 daqiiqo oo keliya.
Wasiirka isdhexgalka oo la kulmay Soomaalida Uddevalla
Abdinoor: Cunsuri ayaa weerar joogto ah igu haya. [Dhagayso]
wallahay waa arin aniga iga yaabin run ahaantii waana wax aduunka aan hore uga maqlin waxaanse u rajaynayaa aaba muslim ka ah inuu labada gabdhood oo wada muslim ah gurigiisa ku noolaadaan insha allah
October 27, 2011 at 19:32
Asc arintani waa arin jaableh, ee akhyaareey sidaad u xalin lahaydeen haday taas oo kale idinku dhacdo. Anigu waxaan odhan lahaa odaygan muslinka ahi ha guursado gabadhan si ay caruurtu meel u wada joogto iskulana qabsato, waa haday suurto gal tahay
October 27, 2011 at 21:26
Asc waa arin aad u cajiiba ah, waxayse aniga ila tahay aabaha muslim ka ah ee dareemi kara macaanka muslinimada in uu san kusiideynayn gabadhii uu soo koriyay gaalnimo!!! Gabadha uu dhalay ee lagaaleeyayna allaha dareensiiyay in nin muslim ah dhalay waa uu u kar gaaray (Allaha quluubaha gagadiya ayaa qalbigeeda macaanka diinta islamka galin sida aan kadareemay akhrinta dhacdadan maadaama ayna ku qanacsanayn galada ugabatay in ay sidatan xaqii ku heshay kuna toosayso islantana hadayba gabadheedii xaqa heshay ayana way soo hadi yoobi insha allah.
asc, Sida horay u dhacday hada ka hor labadii will ee reera hooda u kala badan may waxay arintu isugu timid in ay islanimo labada reerba ku walalobi doonan insha allah
Dr Mohamud says:
sxb Ahmed xal kale oo lagu talin karo maba jiro lakin waa hadii ninkeedii hore ee la dhalay gabadhan uu ogolyahay in ay kala tagaan ama xataa in Gabadhiisa meel kale ku noolan karto ileen wuu dhalay isna marka halkaas ayaa xaalku ka adkaan karaa runtii. sida caadiga ah nina ma u ogolaanayo in gabadhiisa nin kale qaato xataa hadii naagta iyo ninka Muslimka ah isku waafaqaan guur. marka arintu waa adagtahay MAXKAMADna kama fursan doonto.
October 28, 2011 at 00:38
Dr mohamud walaal sida ku cad qoraalka gabadha iyo ninkeedii way kala tageen.
Sida kor ku qoran: (“Waxaan ogaaday markii aniga iyo ninkaygii hore aan isku qabsanay qarashka ilmaha. Waxaan wadatagnay maxkamad taasoo dhalisay in aan qaadno dheecaanka DNA. Jawaabta ayaa noqotay mid layaab weyn nagu noqotay, ma noqon gabadhiisa iyo gabadhayda midna” ayay tiri Yulia.)